warqad VCI waayo, copper - Baako Shiinaha Ma Anshan Steel
warqad VCI qalabka Baakadaha anti-daxalka copper -Eco-friendly, dhaqaale oo cusub Waxaa jira laba nooc oo ah muuqaalka warqad guri iyo warqad crepe. warqad crepe The qof huwan karo xaashida biraha cidhiidhi ah. Waxa looga hortagi karaa sheet copper ka discolor iyo daxalka ah. warqad VCI laga been abuurtay heerarka kulan ee JIS Z 0321-1997 "warqad VCI waayo, copper iyo daawaha". Waxaa lagu daabacay waraaq VCI heli karo. MPTE Wargeysyada VCI gabi ahaanba bedeli baahida loo qabo habab ilaalinta daxalka caadi ah sida ...
Waxaa jira laba nooc oo ah muuqaalka warqad guri iyo warqad crepe. warqad crepe The qof huwan karo xaashida biraha cidhiidhi ah. Waxa looga hortagi karaa sheet copper ka discolor iyo daxalka ah. warqad VCI laga been abuurtay heerarka kulan ee JIS Z 0321-1997 "warqad VCI waayo, copper iyo daawaha". Waxaa lagu daabacay waraaq VCI heli karo.
◆ ilaalinta-wakhti dheer oo naxaas ah, naxaas iyo Alloys ay.
miisaanno kala duwan (60 -300g / m2)
Previous: paperboard biyuhu
Next: warqad VCI for biraha ferrous
Antirust Steel duubaya VCI Kraft Paper
HDPE dahaaray VCI Paper
PE dahaarka VCI Anti-miridhku Kraft Paper
Xoojiyeen VCI Crepe Kraft Paper
Xoojiyeen VCI Paper Waayo Plate Steel
Xoojiyeen VCI Waraaqaha Iyadoo PE / PP Laminations
VCI Birta laalaab
VCI miridhku Paper hortagga Wixii dayactir
Biyuhu Steel duubaya Paper